BBC Nepali - विस्तृत - ‘अमेरिकी गतिविधिले नेपाल-चीन सम्बन्ध बिगार्छ’
‘अमेरिकी गतिविधिले नेपाल-चीन सम्बन्ध बिगार्छ’
पछिल्लोपल्ट अपडेट गरिएको: 20.11.12, 17:58 NST सम्मका समाचार
तिब्बतीहरूको गतिविधि नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा प्रमुख मुद्धा रहंदै आएको छ
प्राध्यापक हू शिशेङ, चीनको एक प्रभावशाली अनुसन्धान संस्था चाइना इन्स्टीच्युट्स अफ कन्टेम्पोररी इन्टरनेशनल रिलेशन्सको दक्षिण एसिया अध्ययन सम्बन्धी प्रमुख हुन्। उनले तिब्बती मुद्दालाई लिएर नेपाली भूमिमा अमेरिकी गतिविधि बढ्दै गए नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने चेतावनी दिएका छन्। हूले, उनकै शब्दमा, तिब्बत मुद्दाबारे सूचना संकलनका लागि अमेरिकाले नेपालको भूमि प्रयोग गर्दा चीनको उच्च नेतृत्व चिन्तित हुने बताएका छन्। बेइजिङमा नयाँ राजनीतिक नेतृत्व आएको सन्दर्भमा बीबीसी नेपाली सेवाका नविनसिं खड्काले उनीसित कुराकानी गरेका थिए।
बीबीसी: अब चीनको नेपाल नीतिमा कुनै परिवर्तन आउला ?
हू: मलाई लाग्दैन त्यस्तो कुनै परिवर्तन हुन्छ। यदि परिवर्तन भयो भने त्यो सम्बन्ध अझै गाढा बनाउन हुनेछ। चीनको नयाँ नेतृत्वले छिमेकीहरुसँग शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको नीति अपनाउनेछ। त्यसको अर्थ चीनले छिमेकमा थप श्रोत साधन खर्च गर्नेछ।
तिब्बतको मामिलामा चाहीं नयाँ नेतृत्वले कस्तो नीति लिन्छ होला?
तिब्बतको सम्बन्धमा चीनले नेपाललाई ठूलो महत्व दिएको छ। यस विषयमा नेपालमा राजनीतिक स्थिरता चीनका लागि सकारात्मक कुरा हुनेछ। चीन आफ्नो तिब्बत नीतिमा नेपालले रचनात्मक भूमिका खेलोस् भन्ने चाहन्छ। खासगरी गैरकानुनी रूपमा तिब्बतबाट भाग्ने तिब्बतीहरुको विषयमा। हामी प्राज्ञहरुले हेर्दा नेपालमाथि पश्चिमा देशहरुले दबाब दिने गरेका छन्।
तिब्बतीहरु आफ्नो भूमि छोडी बाहिर जाने कुरालाई बेइजिङले किन त्यस्तो नराम्रो हिसावले हेर्ने गर्छ?
उनीहरुले बाहिर जान कानुनी रुपमा निवेदन दिन सक्छन्। तर यो त अहिले गैर कानुनी तरिकाले मानव ओसार पोसार गर्ने धन्दा बनिसकेको छ। यो कानुनी मुद्दा हो तर पश्चिमा जगतले यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएका छन्। त्यसरी गैरकानुनी तरिकाले जाने तिब्बतीहरुले आफूहरु राजनीतिक रुपमा पीडित भएको बहाना मात्र बनाउँछन्। उनीहरु खासमा पश्चिमा देशहरु पुग्न चाहन्छन्। र, त्यसकालागि दक्षिण एसियालाई प्रवेशद्धारका रुपमा प्रयोग गर्न खोज्छन्।
तर तिब्बतमा चीनले राजनीतिक धार्मिक एवम् सांस्कृतिक स्वतन्त्रता नदिएको अनि तिब्बतीहरुमाथि दमन गरेकोले उनीहरु त्यहाँबाट अन्यत्र जाने गरेको भन्ने आलोचना छ नी।
मलाई कहिलेकाहीं के लाग्छ भने बाहिरी हस्तक्षेपले गर्दा नै यो विषय गम्भीर बन्न पुगेको छ। उच्च चिनियाँ नेतृत्वले अहिले पनि तिब्बतको मुद्दालाई चीनको आन्तरिक मामिला मान्छन्। यदि बाहिरी हस्तक्षेप निकै हुन थाल्यो भने त्यसले उच्च नेतृत्वलाई अशान्त बनाउन सक्छ र त्यसले यो विषयलाई झनै जटिल बनाइदिन सक्छ।
तपाई त्यसो भन्नुहुन्छ तर तिब्बतीहरुका धर्मगुरु दलाई लामाले बराक ओबामा अमेरिकाको राष्ट्रपतिका रुपमा पुन निर्वाचित भएपछि उनलाई हालै बधाई दिने क्रममा ओबामाको प्रशासनले तिब्बतीहरुको समस्या समाधानका लागि थप कदम चाल्नेछ भन्ने आशा व्यक्त गरेका थिए। चीनले तिब्बती मुद्दालाई राम्ररी सम्हालेको भए उनले त्यसो भन्दैन थिए होलान् नी!
यसमा पहिलो कुरा त दलाई लामाले राजनीतिबाट अवकाश लिइसकेका छन्। त्यसैले त्यस प्रकारको पत्र लेख्नु बुद्दिमानी होइन। दोश्रो कुरा, तिब्बत मामिलामा अमेरिकाले नेपालमा खेल्ने जस्तो भूमिका पनि नकारात्मक हुनेछ र त्यसले भविष्यमा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। अमेरिकाले यस विषयमा जति बढी भूमिका खेल्छ त्यो त्यति नै धेरै नकारात्मक हुनेछ। र त्यसले तिब्बती मुद्दालाई झनै संवेदनशील बनाइदिनेछ।
दलाई लामाले ओबामालाई त्यस्तो पत्र लेखेपनि अमेरिकाले तिब्बतबारे नेपालमा कुनै भूमिका खेल्छ भनेर तपाई कसरी भन्न सक्नुहुन्छ?
अमेरिकाले गुप्तचरीसम्बन्धि सूचना संकलनका लागि नेपालको भूमि प्रयोग गरेको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। तिब्बती क्षेत्रबारे जासुसी गर्न अमेरिकाले त नेपाललाई स्वर्ग नै भन्ने गरेको छ।
तर अमेरिकाले त्यसो भन्ने गरेको त कतै आएको छैन नी।
काठमाण्डूस्थित अमेरिकी दुतावासलाई हेर्नुस् न। त्यहाँ उनीहरुलाई चाहिने भन्दा निकै धेरै कर्मचारी छन्। म आफैंलाई थाहा भए अनुसार अमेरिकी दुतावासले नेपाल र तिब्बतको सीमाक्षेत्रमा रहेका केही गुम्बाहरुमा ठूलो आर्थिक सहायता दिने गर्छ। त्यसबाट म व्यक्तिगत रुपमा के बुझ्छु भने उनीहरुले त्यस्ता गुम्बाहरु सूचना संकलन गर्ने कामका लागि प्रयोग गर्छन्।
त्यो तपाइलाई लाग्ने कुरा भयो तर त्यसको कुनै प्रमाण त दिन सक्नुहुन्न नी यहाँ?
सन् १९५० को दशकदेखि ७० को दशकसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाले तिब्बती उग्रवादीहरुलाई आर्थिक सहायता प्रदान गरेको थियो। तिनलाई भारतको गुप्तचर निकायहरुको पनि समर्थन प्राप्त थियो। उनीहरुले नेपालको मुस्ताङ क्षेत्रलाई तिनका मिलिसिया आधारहरुमध्येको एक बनाएका थिए। उनीहरुले त्यतिखेर तिब्बती क्षेत्रका कतिपय ठाउँमा यातायातका साधनहरुमाथि आक्रमण गरेका थिए। त्यस्ता सैन्य र आर्थिक सहयोगहरु ७० को दशकमा रोकियो किनभने त्यसबेला रुसलाई नियन्त्रणमा राख्न अमेरिकालाई चीनको सहयोग चाहिएको थियो।
एकछिनलाई तपाइले भने झैं हो भनी मान्ने हो भने नेपालमा चीन पनि सक्रिय होला नी त्यसो भए, खासगरी अमेरिकालाई जवाफ दिन।
कसरी त्यसो गर्ने! अमेरिका त्यति टाढा छ। त्यसो गर्न व्यवहारिक छैन। हामीलाई के लाग्छ भने नेपालमा चीनको संलग्नता निकै थोरै छ किनभने चीन के कुरामा संवेदनशील छ भने उसले नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बढाए त्यसले भारतको चिन्ता बढाइदिन्छ अमेरिकाको होइन। चीन नेपालमा भारतसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छ प्रतिस्पर्धा होइन।
तर त्यस्तो प्रतिस्पर्धा शुरु भइसकेकाले गर्दा नेपाल संकटको दलदलबाट निस्कन नसकेको भन्ने कतिपय विश्लेषकहरुको ठहर छ नी त।
हामी भारतलाई के विश्वस्त तुल्याउन प्रयास गर्छौ भने तिब्बतको ठूलो भूभाग नेपालको सीमासित जोडिएकाले र तिब्बती क्षेत्रमा हामीले केही समस्याको सामना गर्नु परेकाले हामीले नेपालसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्नु पर्ने हुन्छ र नेपालको विकासका लागि पनि चीनको लगानी आवश्यक पर्छ। विश्वका दुई ठूला बजारबीच रहेर पनि नेपाल पिछडिएको छ। नेपाललाई विकास गर्न नदिनु चीन र भारत दुवैका लागि लज्जाजनक कुरा हो।